यौ- न खे’लौनाबाट हुने फाइदा र बेफाइदा के-के हुन् ? – live 60media
यौ- न खे’लौनाबाट हुने फाइदा र बेफाइदा के-के हुन् ?
दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि हामी घरभित्रै बस्न बा-ध्य छौँ । यौ-न पा’र्टनर नहुने व्यक्तिले यौ-नसु-खबाट विमु’ख हुनुपर्ने बा-ध्यता बढ्दो छ । जब-र्जस्ती यौ-न चा-हनालाई दबा-उन खोजेको खण्डमा मान-सिक स’मस्या निम्तिन बेर लाग्दैन । यस्तो परिस्थितिमा यौ-न खे’लौना राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।
विवाहपूर्व यौ-नस’म्बन्ध अस्वीकार्य हुने हाम्रो जस्तो समाजमा यौ’न खे’लौनाको उपयोग गतिलो विकल्प हुन सक्छ । त्यसैले पनि नेपालका शहरी क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि यौ-न खे’लौनाको बिक्रीवितरण बढ्दो छ ।
यौ-न खेलौ’ना एक जनाले मात्र प्रयोग गर्ने गरेको खण्डमा कुनै पनि यौ न रो ग सर्दैन । ग र्भधारणको चि’न्तै हुँदैन । देशमा अहिले यौ-न अ-पराधका घ-टना बढिरहेका छन् । पो-र्नोग्रा-फी वा यस्तै अन्य कुनै कारण विकसित आफ्नो क्षणिक यौ-न उत्ते-जनालाई म त्थर पार्न यौ-न खेलौ-नाले सघाउने हुनाले यौ-न अ-पराधमा कमी ल्याउन मद्दत गर्छ ।
कतिपय ला’गु’पदार्थ दु’व्र्यस’नीले सु’ई साटफेर गरेजस्तै साथी–साथीले यौ-न खे’लौना एकअर्कासँग सेयर गरेमा भने विभिन्न खाले यौ-न रो’ग सर्ने सम्भावना हुन्छ । कतिपय यौ-न खे-लौना सफा गर्न एवं की-टाणुरहित पार्न गाह्रो हुन्छ ।
खे’लौना राम्ररी सफा नगरीकन प्रयोग गरेमा एकअर्कामा विभिन्न यौ-नजन्य रोे’ग सर्ने सम्भावना हुन्छ । सबैजसो यौ-न खे’लौना स्वा स्थ्यमैत्री नहुन पनि सक्छन् । कतिपय खे’लौनाको गल’त प्रयोगका कारण यौ-नांगमा चो-टपट-कसमेत लाग्न सक्छ । गुणस्तरहीन सामग्रीबाट निर्माण गरिएका यौ-न खेलौ’नाका कारण छालाको सम-स्या निम्तिन सक्छ । एल’र्जी हुन सक्छ ।
कम गुणस्तरीय, कमसल खालको यौ न खे’लौनाको सतह खस्रो र धारि’लो खालको छ भने यौ नांगमा घा उ लाग्ने, ज लन हुने, यौ नांग नै बिग्रि ने सम्भावना पनि हुन्छ । ला’गुपदार्थ, म’द्यपान, पो-र्नोग्रा’फीजस्तै यौ न खे-लौनाको ल-त लाग्न सक्छ । कतिपय यौ न खेलौ ना रियल लाइफ साइजकै हुनाले घर, डेरा होस्टेलमा लु’काएर राख्न सम्भव हुँदैन ।
यौ न खे लौनाको प्रयोगबारे अन्य व्यक्तिले थाहा पाए असजिलो महसुस हुने, ही नभावना उत्पन्न हुने र आफूप्रति नै घृ णा उत्पन्न हुने स्थिति बन्न सक्छ । यसकारण त नाव, ड-र, चि’न्तालगायत मान’सिक स’मस्या उत्पन्न हुन सक्छन् । बजारमा आएका नयाँ–नयाँ खेलौ’ना किन्दै, घरमा थुपार्दै जाने प्रवृत्तिका कारण यो सो’ख खर्चिलो साबित हुन सक्छ ।
अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनअनुसार यौ-न खे-लौना प्रयोग गर्ने १८ प्रतिशत महिलाले खेलौ-ना सफा गरेको पाइएन । प्रत्येक पटक प्रयोग गरेलगत्तै यौ-न खे-लौना सफा गरिएन भने विशेषतः यो-नि वा गु-दद्वार मै-थुनमा प्रयोग गरिने यौ-न खे-लौना सं-क्रमित भएमा जननेन्द्रियमा सं-क्रमण हुन गई सेतो पानी ब-ग्ने, चिला-उने, ग-नाउने पानी ब ग्ने, पि’साब गर्दा ज’लन महसुस हुने, यौ-न सम्प-र्क राख्दा दु’ख्ने आदि सम’स्या निम्तिन सक्छन् ।
म’द्यपान गरेको बेला पनि यौ-न खेलौ-ना प्रयोग गरेको हुन सक्छ । यस्तो बेला सफा गर्ने हे’क्का, जाँगर र सम्झना पनि नहुन सक्छ । प्रयोगपछि लुका’इराख्नुपर्ने बा’ध्यता आइलाग्न सक्छ । भोलि वा अन्य दिन फेरि प्रयोग गर्ने बेला भइसक्छ ।
त्यही यौ-न खे-लौना यसो पुछपाछ गरेर काम चलाउने बानी बस्न जान्छ । अनि यौ-न खे-लौना सफा गर्ने काम पनि छेपारोले घर बनाउनेजस्तै हुन जान्छ । यो-निरस वा शरीरको अन्य स्रावयुक्त यौ-न खे-लौनालाई सफा नगरी लु-काइराख्दा ओसिलोपनले यस्तो यौ-न खेलौ’नामा ढु’सी पर्ने, फो’हर जम्मा हुने सम्भावना रहन्छ ।
यौ*न खे*लौना कसैसँग साटासाट गरी प्रयोग गरिएको खण्डमा एच*आईभी, हेपा*टाइटिस बी र सीजस्ता यौ*नजन्य सं*क्रमण हुने जो*खिम रहन्छ । ‘से’क्सुअ’ल्ली ट्रा’न्समिटेड डिजिज (एसटीडी) जर्नल’मा उल्लेख भएअनुसार यो’निभित्र छि’राउने खालका यौ-न खे-लौनाका कारण यो-नि एवं यो-निमा’र्गको सं-क्रम’णमा बढोत्तरी भएको छ ।
आफ्नो यौ-नांगको साइ’जसँग मेल नखाने यौ-न खेलौ-ना छ, र-क्सी वा ला’गु-पदार्थले लट्ठि-एको छ, अधिक यौ-न उ-त्तेजनाको बेलामा यौ-न खे-लौनाको जथाभा-वी प्रयोग गरिएको छ भने यौ-नांगमा चो-ट पुग्ने तथा यौ’नां-गको सतही झि ल्ली ता छिने र च्या-तिने सम्भावना बढी हुन्छ ।
यौ,नांगको सतहमा घा,उ भइरहेकै बेला यौ,न खे,लौना साटासाट गरी प्रयोग गरेमा यौ,न रो,ग स,र्ने जोखि,म झन् बढ्छ । कतिपय यौ,न सामग्री वा खे,लौना पोलिभिनाइल क्लोराइड (पीभीसी) एवं रबरबाट बनाइएको हुन्छ ।
यस्तो सामग्रीले कतिपय व्यक्तिमा ए,लर्जी गराउने, डाबर उठाउने, ज,लन ग-राउने, यौ,नांग नै सु-न्निने हुन्छ । सिन्थेटिकबाट बनाइएका कतिपय यौ,न खेलौ,नाले क्या न्सर गराउने सम्भावना हुन्छ ।
सही तरिकाले प्रयोग गर्न यौ न सामग्रीको बाहिरी कभरमा उल्लिखित निर्देशन राम्ररी पालना गर्नुपर्छ । साव धानी अपनाइएन भने कतिपय यौ न खेलौ ना यो नि वा गु द द्वारमै अ’ड्कि ने ख तरा पनि हुन्छ ।
अमेरिकामा गरिएको एक अनुसन्धानअनुसार यौ न खेलौ नाका कारण हुने चो टपटकका घ टनामध्ये ८३ प्रतिशत यौ न खे लौना अड्कि नेसँग सम्बन्धित पाइएको छ ।
डिल्डो वा भाइ’ब्रेटरजस्ता खे’लौनाबाहेक यो नि वा गु दद्वारबाट रिमोट कन्ट्रोल, सेल फोन, क्यान बि’यर वा रे’डबुलका बट्टा निकालिएका विवरण मेडिकल जर्नलमा उल्लेख गरिएका छन् । यस्तो दुर्घ टना गु दद्वा र मैथु-नमा बढ्ता हुने गरेको पाइएको छ । यौ न खे लौनाका रूपमा पुरुष लिं गको फे’दमा औँठीको प्रयोगबाट स मस्या भएका घ टना पनि छन् ।
लामो समयसम्म भाइ ब्रेटरजस्ता यौ न सा’मग्रीको प्रयोगले यौ नांगको कुनै भाग विशेष (जस्तो कि भगां कुर) लाई कालान्तरमा ला-टो बनाउने अर्थात् संवे नद-शीलतामा कमी ल्याउने हुन्छ । यसले गर्दा भविष्यमा प्राकृतिक यौ न सम्ब न्ध राख्दा यौ न आ नन्द लिन गा-ह्रो पर्न सक्छ ।
← भाइरल आमाछोरी दोहोरी गाउन इन्द्रेनीमा पुग्दा यस्तो भयो,श्रीमानलाई सम्झेर रूवाबासी-भिडियो हेर्नुहोस
यस्तो छ बलिउड अभिनेत्री कट्रिना कैफको फिटनेशको सेक्रेट →